Yaadannoo iccitii Chibook kutaawwan 6, 7 fi 8ffaa - BBC News Afaan Oromoo
6) Gaaffii gaa'elaa
Gaaffiin gaa'elaa hidhattoota irraa yeroo baay'ee kan dhufu yommuu ta'u, humnas ni dabalata.
"Dubartiin tokko gara kutaa keessa jiru seenuun waa fudhachuu barbaadde.
Achiis Maalaam Ahimad [hidhattoota keessaa tokko] dhufee, waa'ee gaa'elaa gaafate. Isheenis, 'hin fedhu.' jette.
Innis, 'Waa'ee heeruma kanaa murteen ke maalinni?' jedhee gaafateen.
"Isheenis hin ta'u jette. Akkamitti Mana Barnootaa Dubartootaa Mootummaa -GGSS Chibook jedhamu irraa ukkaamsanii gara Saambisaatti fidanii waa'ee gaa'elaa itti haasa'u. Akkamitti itti heerumti - abbaa fi haatishee, adaadonni ishee a kkasumas hiriyoonni ishees kana quba hin qaban… Ergasiis, sitti heerumuu didee yoon Rabbii koo duwwaa nan hordofa yoo ta'e, kun gaarii mitii? Jettee gaafatte. Innis, 'lakkii kun badaadha' jedheen.
Muraasnis akka yaadasaanii jijjiraniif dhiibbaan irra gaheera.
"Namoonni konkolaataa [minibaas] Hilux'in ennaa dhufan argine. Achis eenyutu heerumuu akka barbaadu gaafatan. Dubarri dhugumaan Musliima taate, kan amanticha harka lamaan jabeessitee qabde kamuu heerumuu qabdi nuun jedhan. Daqiiqaa 30 nuu kennan, namuu ni callise. Sa'aatii tokko boodas namni dubbate hinturre.''
Naawomii Adaamuun akka natti himtetti, warri heerumuu didan akka garbaatti ilaalamu turan. 'Guyyuu, nu reebu. Akka itti heerumnu nitti himu, yoo didde si tumuutti ka'u. Haadholii warraa isaaniif kafana miiccinaaf, bishaan waraabnaaf, waan hundaa hundaa dalagnaaf. Garboota turre.''
7) Warra miliqan, jiraattonni naannoo deebisan
Akka idil addunyaatti duulli Dubartoota Keenya Nu Deebisaa [Bring Back Our Girls] jedhu adeemsifamaa tureera. Namoonni bebbeekamoon kanneen akka Giiftii Duree Misheel Obaamaa dabalatee irratti hirmaatanii turan. Haa tahu malee, jiraattonni naannichaa tokko tokko garuu dubartoota hidhattoota kana biraa miliqanii badan deebisanii kennan.
"Gaaf tokko dubartoonni muraasni fiiganii badan. Miliquuf yaalii taasisanillee hin dandeenye. Namoonni sunniin qaban. Akkaataan itti qabamanis, suuqii tokko galanii, gargaarsa gaafatan. Bishaaniifi biskuuta akka kennaniif gaafatan. Namoonni kunniinis, "Isin eenyu? Eessarraa dhuftan?"jedhanii gaafatan. Dubartoonnis, 'Nuti warra Bokoo Haraam GGSS [Mana Barnootaa Dubartootaa Mootummaa] Chibook irraa nu ukkaamsee nu fudhatedha.' Achis namni tokko, 'Kunniin ijoollee Sheekaawuu mitii?' jedhe.
''Achiis nyaataa fi iddoo ciisichaa kennaniif. Guyyaa itti aanutti gara iddoo dhufanitti deebisan… Galgala gara yeroo Saambisaa qabanii fidan, garafanii morma isaanii irraa akka kutan dorsisan.''
8) Tapha amantaa jijjiiruu
Dubartoonni kunniin yoo amantaa isaanii gara Islaamaatti geeddaran, gara maatii isaanitti akka deemuu danda'an itti himame. Warreen amantaa jijjiiran, warreen hin jijjiirre qabamanii turuu isaaniif sababa waan taatan jedhuun.
''Warri amantaa Islaamaa hin fudhanne, akka hoolotaa fi saawwan akkasumas re'ootaati waan taheef... ni ajjeesna jedhan. Achiis Maalaam Abbaa [hidhattoota keessaa tokko] warreen Musliima hintaane gartokkeetti akka adda bahan. Kanneen Musliima tahnitti akka hin makamne. Gartokkeetti akka dhaabannu nutti himan - isaanif iddoo biraa akka qopheessan himan. Namni biraa kun hin ta'u, walumaan turuu qabu jedhe. Erga deemanii torban tokkoon booda, nuti warri Musliima hintaane akkas jenne - numatu gara mana keenyaa akka hindeebine of dhorkaa jira.''
Gochi buttaa raawwatamee kan itti yaadame hin turree
Yaadannoo iccitii shamarran Chibook -kutaa 2
Yaadannoo iccitii shamarran Chibook- Kutaa 3
Yaddannoo iccitii shamarran Chibook Kutaa 4
Yaddannoo iccitii shamarran Chibook Kutaa 5
Yaadannoo iccitii Chibook 5: Hijaaba qoramuu ittisuuf
Poolisiin nama gurraacha ajjeesnaan Miniyaapoolisitti jeequmsi ka'e
Iraan haleellaa ’Israa’el buufata niwukileeraasheerra qaqqabsiifteef ‘haaloo baati’-Zariif